အသစ်ပေါက်ကြားတဲ့ Oppo Reno ရဲ့ပိုစတာမှာအသေးစိတ်များစွာကိုဖော်ပြထားတယ် Androidsis
စမတ်ဖုန်း Oppo Reno တရုတ်နိုင်ငံတွင်officialပြီ ၁၀ ရက်တွင်တရားဝင်သွားရန်စီစဉ်ထားသည်။ The ကင်မရာနမူနာ ကင်မရာ၏စွမ်းရည်ကိုဖော်ပြရန်မကြာသေးမီက Weibo တွင်ပေါ်လာသည် 10X optical zoom ကရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုနှင့်အတူ။
အခုသူတို့မထွက်ခင်မှာ Weibo မှာပေါ်လာတယ် သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာစျေးနှုန်းများနှင့်အတူမိုဘိုင်းမျိုးကွဲအပေါ်အရည်ရွှမ်းအသေးစိတ်ကို.
1 Oppo Reno သတ်မှတ်ချက်များနှင့်မူကွဲ
2 Oppo Reno စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
2.1 Oppo Reno Light Deluxe ထုတ်ဝေမှုစျေးနှုန်း
2.2 Oppo Reno စျေး
2.3 Oppo Reno Lamborghini Edition စျေးနှုန်း
Oppo Reno သတ်မှတ်ချက်များနှင့်မူကွဲ
Oppo Reno ၏ပိုစတာအသစ်
ယိုစိမ့်မှုအသစ်အပေါ် အခြေခံ၍၊ 510 MP Sony IMX32 ရှေ့ကင်မရာကိုf/ 1.7 aperture ပါရှိသည်။ Sony ကဒီအာရုံခံကိရိယာတည်ရှိမှုကိုအတည်မပြုရသေးဘူး၊ ဒါကြောင့်ဖုန်းမှာမကြာခင်ထွက်ပေါ်လာတော့မှာပါ။
Reno ၏သုံးဆကင်မရာတည်ဆောက်ပုံ ပါဝင်လိမ့်မည် ၄၈ megapixel Sony IMX586 အဓိကအာရုံခံကိရိယာအဖြစ်, 120 ဒီဂရီစူပါကျယ်ပြန့်ထောင့်အလယ်တန်းအာရုံခံကိရိယာနှင့်ဆုံးရှုံးမှု 10X zoom စွမ်းရည်နှင့် focal lengths နှင့်အတူ 16mm - 160mm နှင့်အတူတယ်လီဖုန်းမှန်ဘီလူး။ အဓိကအာရုံခံကိရိယာသည်f/ 1.7 မှf/ 2.4 သို့ပြောင်းလဲနိုင်သော apertures ကိုထောက်ပံ့သည် Oppo R17 Pro ကို။ Telephoto မှန်ဘီလူးသည်တူညီသော variable aperture ကိုပေးလိမ့်မည်။
Oppo Reno မူကွဲ
ဖုန်းမျက်နှာပြင်သို့ရောက်လျှင်ဖုန်းသည် FullHD + resolution 2,340 x 1,080 pixels နှင့် HDR10 + တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးထားသည့် dynamic AMOLED မျက်နှာပြင်တပ်ဆင်ထားသည်။ Corning Gorilla Glass6ဖန်ခွက်။ ဒါ့အပြင် ဆsix္ဌမမျိုးဆက် In-screen fingerprint scanner တပ်ဆင်ထားသည်လက်ရှိလက်ကိုင်ဖုန်းများတွင်တွေ့ရသော optical fingerprint scanner solution ထက် ၁၅ ဆပိုကောင်းသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။
ဖုန်း၏နောက်ဘက် panel တွင် Gorilla Glass6ဖန်သားပြင်ပါ ၀ င်ပြီး ၇ စီးရီးအလူမီနီယမ်အလွိုင်းပါ ၀ င်သည်။ ကိရိယာ၏အထူ 8mm ထက်နည်းရမည် နှင့် gradient ကိုအရောင်ရွေးချယ်မှုအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ Oppo Reno တွင် ၄,၀၆၅ mAh စွမ်းရည်ရှိသောဘက်ထရီတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် Super VOOC 4,065 W အမြန်အားသွင်းရန်အထောက်အပံ့တပ်ဆင်ထားသည်။ El Snapdragon 855 ဖုန်းရဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးမူကွဲများကိုပါဝါပေးပါလိမ့်မယ်, အတူပါလိမ့်မယ်အခြားသူတွေရဲ့ဟောပြောချက်ရှိပါတယ်နေစဉ် SD710 y SD675။ ဖုန်းကိုမော်ဒယ်သုံးမျိုးနဲ့ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ RAM 8GB + သိုလှောင်မှုပမာဏ 256GB, 10GB RAM + 256GB နှင့် 12GB RAM + 256GB တို့ပါရှိသည်။ ဖုန်းရဲ့ CPU ကို Super Ice Cooling နည်းပညာကကူညီလိမ့်မယ်လို့သိရပါတယ်။
terminal ကို 5G model ဖြင့်ရနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် 12GB RAM နှင့် 256GB Internal Storage ပါရှိသည်။ Snapdragon 855 မိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းသည် X50 LTE modem ပါ ၀ င်သောကြောင့် 5G ဆက်သွယ်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ယိုစိမ့်မှုသည်မူကွဲတည်ရှိမှုကိုဖော်ပြသည် Oppo Reno Lamborghini။ ၎င်းသည် ၅၀၀၀ mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်ပြီးမော်ဒယ်လ်နှစ်မျိုးဖြင့်လာမည် - 5,000 GB RAM + 12 GB သိုလှောင်မှုနှင့် 256 GB RAM + 12 GB သိုလှောင်မှု - ပါရှိသည်။ ဤမူကွဲသည်ယိုစိမ့်မှုအရအရည်သတ္တုကိုယ်ထည်ကိုတပ်ဆင်ထားသည်။
El Oppo Reno အလင်း Deluxe Edition ကို ၎င်းသည်အခြားတယ်လီဖုန်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ Snapdragon 675 chipset ဖြင့် ၄၈ မီဂါပစ်ဇယ် Sony IMX586 အာရုံခံကိရိယာ၊ ၁၂၀ ဒီဂရီအကျယ်ထောင့်မှန်ဘီလူးနှင့် 48X lossless zoom telephoto မှန်ဘီလူးပါ ၀ င်သည့်ကင်မရာသုံးဆပါဝင်သည်။ ၎င်းကိုမော်ဒယ်နှစ်မျိုးဖြင့်ရနိုင်သည်။ RAM 120 GB + သိုလှောင်မှု5GB နှင့် 8 GB + 128 GB ။
ဒီနောက်ဆုံးပေါ် model မှာ AK377A audio chip နဲ့ဆဌမမျိုးဆက် in-display fingerprint sensor ပါလိမ့်မယ်။ ကျန်တဲ့သတ်မှတ်ချက်များကတော့ပုံမှန်ဗားရှင်းနဲ့တူပါလိမ့်မယ်။
Oppo Reno စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု
OPPO Reno ဖုန်းလွှတ်တင်မှုပွဲသည်တစ်လမပြည့်မီဖြစ်လိမ့်မည် 10 ဧပြီလ.
ယခင်က Bluetooth Authority SIG သည် Snapdragon 710 SoC ဖြင့် Reno ထုတ်ဝေမှုကိုမကြာသေးမီကအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ယိုစိမ့်မှုအသစ်တွင်ဤမော်ဒယ်နှင့် ပတ်သတ်၍ သတင်းအချက်အလက်မရှိပါ။
Oppo Reno Light Deluxe ထုတ်ဝေမှုစျေးနှုန်း
8GB RAM + 128GB ROM: ၃၆၉၉ ယွမ် (ယူရို ၄၈၆) ။
8GB RAM + 256GB ROM: 3,999 ယွမ် (~ 526 ယူရို) ။
Oppo Reno စျေး
8GB RAM + 256GB ROM: ၃၆၉၉ ယွမ် (ယူရို ၄၈၆) ။
10GB RAM + 256GB ROM: ၃၆၉၉ ယွမ် (ယူရို ၄၈၆) ။
12GB RAM + 256GB ROM: ၃၆၉၉ ယွမ် (ယူရို ၄၈၆) ။
Oppo Reno Lamborghini Edition စျေးနှုန်း
12GB RAM + 512GB ROM: ၃၆၉၉ ယွမ် (ယူရို ၄၈၆) ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Oppo Reno ၏တရားဝင်ပိုစတာအသစ်ထွက်ပေါ်လာပြီး၎င်းနှင့်၎င်း၏ဈေးနှုန်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာလည်းထွက်ပေါ်လာသည်
Redmi Note7Pro ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရောင်းချမည်မဟုတ်
Pixel4ပေါက်ကြားခြင်း - မီးဖို၌ရှိသောနောက်ထပ်ထင်ရှားသောအချက်အလက်များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း